Vapoteri veSyria: Ziva nyika dzipi dzinovagamuchira!
November 3, 2020 Karuna Chandna vapoteri, Siriya, famba
Zvinodiwa zvevagari veSyria ndeyokupinda muganho. Vakavateresa nezviremera zveimwe Nyika. Kubva muna1 Gumiguru 2019, vanhu veSyria vaive nevisa kana vhiza-yemahara yekupinda munyika makumi maviri nepfumbamwe. Zvakare, matunhu akawana chinzvimbo 29th
Mabasa Uye Kushanda? Ziva Iyo Shanduro Shanduro muSiria!
April 30, 2020 Karuna Chandna mabasa, Siriya
Siria inorara kuMiddle East. Izvo zviri pakati peRebhanoni neTurkey. Ndiwo muganho weGungwa reMedhiya. Nyika ine 605 km yemuIraq. 76 km of Israel muganho. 375 km km weJoridhani. 375 km of
April 14, 2020 Karuna Chandna Siriya, famba, vhiza
Visa kuSyria yakaoma kuwana. Vanhu vazhinji vanoendesa kunyorera uye vangangorambwa kana kumirira kupihwa mvumo. Sezvo dambudziko radzikamisa nekupedzisa kuparadzwa kweDaesh, Siria yakavhurika zvakare bhizinesi uye yakagadzirira kugamuchira vashanyi. Pazasi